AMA-AMERICA WOKUHWEBA WOKUPHATHA - AMA-Geofumadas
Meyi, 2021 GPS / Izinsiza kusebenza, Ubunginiyela, Innovations
Lo Septhemba 7,8, 9 no-XNUMX wonyaka wamanje uzobanjelwa eLas Vegas Nevada - e-USA the "I-UAV Expo Americas". Umbukiso wezentengiselwano ohamba phambili eNyakatho Melika kanye nengqungquthela egxile ekuhlanganisweni nasekusebenzeni kwe-UAS kwezentengiselwano nababonisi abaningi kunanoma yimuphi omunye umcimbi we-drone wezentengiso. Ikhuluma ngezihloko ezimalunga nokwakhiwa, ezamandla kanye nezinsizakalo zomphakathi, amaHlathi nezolimo; Ingqalasizinda Nezokuthutha; Izimayini nezihlanganisi; Izinsizakalo zezimo eziphuthumayo nokuphepha komphakathi; Ukuphepha; kanye ne-Topography ne-cartography
Ngaphezu kwalokho, kufaka phakathi izihloko ezinselele kanye namathuba avezwe yi-COVID-19, indawo elawula, ukuhlanganiswa okuphephile kwe-UAS esikhaleni somoya, nobuchwepheshe be-UAS obuphazamisayo.
Abakhangisi abangaphansi kwe-100 abavela kuwo wonke umhlaba bazokwethula izinto ezintsha, imikhiqizo kanye nezixazululo zabo ezihlobene ne-drones, ukwakhiwa, amandla, ezolimo, ingqalasizinda, ezokuthutha, ukuphendula okuphuthumayo noma i-cartography. Njengakwezinye izinhlelo zalo mcimbi omkhulu, izofaka amaseshini abheke phezulu embonini abhekana nezinselelo namathuba ahlukile embonini ngayinye, kanye nezindlela ezinhle kakhulu zokuhlanganiswa nokusebenza okuphephile nokusebenzayo kwe-drone.
Inhloso yalo mcimbi ukuheha abasebenzisi abanentshisekelo embonini ye-UAV, ukuhlinzeka ukuxhumana okwanele phakathi kwabachwepheshe nabaholi bomkhiqizo ngamunye owethulwayo. Ngakho-ke, ukwakhiwa kwamathuba wokuxhuma kuyaqala, nezingxoxo zokutholwa kwezixazululo noma imikhiqizo ehambelana nezidingo. Izihloko ezijulile ezihlobene nale mibuzo elandelayo kuxoxwa ngazo engqungqutheleni:
Kwenzekani ngomthethonqubo we-FAA?
Ngabe ama-drones angalisheshisa kanjani ibhizinisi lakho?
Sizoyibona nini uhlelo lwe-UTM oluhlanganisiwe?
Inhlangano ingasondela kanjani ekwakheni uhlelo lwe-drone esikalini?
Ngabe i-ID yesilawuli kude izosho ukuthini ngekusasa lesibhakabhaka?
Umbono womphakathi wama-drones ukuthinta kanjani ukwamukelwa?
Inhlangano kufanele ibale kanjani i-ROI yama-UAV?
Ingabe ikhona indlela yokwenza okuhle yokunika amandla ukuphepha kwebanga lebhizinisi?
Kusho ukuthini ukusebenzisa ama-drones asebenzisa izinhlelo ze-AI neML?
Ngabe opharetha bangalinganisa kanjani kangcono inani lobuchwepheshe be-drone maqondana nokukhiqiza, ukusetshenziswa okulula kanye nenzuzo?
Ama-UAS aphambili kakhulu avela kubahlinzeki bezixazululo abahamba phambili emhlabeni akhonjiswa embukisweni, aqinisekisa indlela ephumelelayo yokukala nokuqhathanisa izixazululo. Imisebenzi yalezi zinsuku okukhulunywe ngazo ngenhla yehlukaniswe ngale ndlela elandelayo: Septhemba 7: Ingqungquthela eyandulela eyokuqala, imiboniso kanye nemihlangano yokufundisana futhi kusuka ngoSepthemba 8 kuya ku-9: Ukuhlelwa kwezingqungquthela nemibukiso.
¿KUNGANI UYA KULOMCIMBI?
Okokuqala, ukuba nesikhala sokushintshana ngemibono nabaqeqeshiwe kanye nabaholi bemboni ngesinye sezizathu zokuqala zokuthi kungani ukuya emcimbini kufanele kubhekwe. Kwenzeke kanjani lokhu ekwakhiweni kwezixazululo nemikhiqizo ukuthuthukisa imisebenzi noma izinqubo ezenziwa ngabahlaziyi nsuku zonke.
Esinye isizathu ukuthi kungenzeka ukuthi uxhumane nabaholi futhi uthuthukise ulwazi endaweni edingekayo. Okulandelayo, singasho ukuthi lolu hlobo lomcimbi lubalulekile ukwenza ubuchwepheshe bamuva bubonakale, bukhuthaze imiboniso futhi bakhe izinkontileka noma imifelandawonye engaba khona. Engqungqutheleni, abaholi, ochwepheshe noma abathuthukisi bangakhombisa ukurekhodwa kwangaphambili kwamakhono emikhiqizo yabo futhi bakhombise ukuthi badalelwe ini.
Abanye bangazibuza, ngubani ongaya kulo mcimbi: Abanikazi Bempahla kanye nabaSebenzisi, i-EPC (Ubunjiniyela / Ukuthengwa / Ukwakhiwa), i-AEC (Abakhi Bezakhiwo / Abanjiniyela / Ukwakhiwa), Abaphenyi, Abaholi Bezobuchwepheshe, Abaphathi BamaProjekthi, Abalimi kanye Nabaluleki Bezilimo, Abaphenduli Bokuqala noMthetho Ukuphoqelelwa.
Kuwebhusayithi yenkomfa, ungafinyelela uchungechunge lwama-webinars amaningi wamahhala ahlobene nezinhlelo zokusebenza ze-UAV. Ezinye zezihloko zalezi zingqungquthela yilezi: "Ama-AI Drones: Ukufaka ama-UAV enembile ekuHambeni komsebenzi","Ukubika kwesikhathi sangempela: Umthelela we-UAV ekuphepheni komphakathi”. Ithuba lokwenza ngcono ulwazi nokuzibandakanya nokusetshenziswa kwalawa mathuluzi abalulekile wokuthola idatha. Ngaphezu kwalokho, ama-webinars ahlobene nohlelo lwangaphambilini lwengqungquthela nawo alayishwa kuwebhu, uma kungenzeka kube khona noma ngubani onentshisekelo yokubuyekeza lokhu okuqukethwe.
Izindleko zengqungquthela ziyahlukahluka kuye ngosuku olukhethiwe nohlobo lwabakhona phakathi kuka- $ 150 kuya ku- $ 895, ungakhetha isaphulelo seqembu. Kukhona ukudlula okugcwele, Ngolunye usuku, ama-Droneresponders, kanye nomnyango kuphela egumbini lokubonisa. Bangabuye bahlolwe kuwebhusayithi yomcimbi ngokuchofoza lapha.
Iphasi lamahhala noma lamahhala litholakala kuphela endaweni yombukiso, lapho uzokwazi ukufinyelela ezindaweni lapho kukhonjiswa khona ubuchwepheshe be-UAS obusha futhi obubaluleke kakhulu emhlabeni, kanye nalawo adalwe amanyuvesi amakhulu ku " Inkundla Yenyuvesi ”. Ngaphezu kwalokhu okungenhla, ukuvunyelwa ukungena ku- "Exhibit Hall Theatre" kuyamukelwa, okuzoba nohlelo lokufundisa lwazo zonke izethameli. Abantu abanephasi lamahhala bazokwazi ukujabulela izikhathi zokuxhumana nabantu abazobe bekhona nalabo abaphethe izitendi.
Kusengenzeka ukuthumela imininingwane yokubamba iqhaza emibonisweni futhi njengengxenye yezikhulumi zomcimbi. Kumele kubhekelwe ukuthi iBhodi Elilulekayo kanye nalabo ababhekele ingqungquthela ukuthi babe khona, bacwaninga ngokucophelela zonke iziphakamiso zabethuli abangase babe khona noma izikhulumi kulolu hlobo.
Siyazi ukuthi sisengcupheni yokutheleleka yi-COVID-19, yingakho inhlangano ithathe izinyathelo eziqinile zokuphepha kubo bonke abakhona, ngakho-ke konke kwenzeka endaweni enempilo futhi engenabungozi.
Phakathi kwezinyathelo zokuqapha ezibhekiwe kubalwa: ukuvinjelwa kokuthintana ngokomzimba, ukubhaliswa okungathintwa, ukuqhela kwezenhlalo, ukuhlanza njalo, inhlanzeko yezandla, ukwenza ngcono ukuphepha kokudla, ukuphoqelelwa kobuso obuyimpoqo (ukusetshenziswa kwamamaski), kanye nomuntu oqeqeshiwe ukuhlinzeka ngosizo lokuqala .
ICommercial UAV Expo Americas yethulwa yiCommercial UAV News futhi ihlelwe yiDiversified Communications, umkhiqizi wemicimbi yomhlaba ohlela futhi iCommercial UAV Expo Europe (Amsterdam, Netherlands), iGeoBusiness Show (London, UK) neGeo Week, equkethe iMephu yeLidar Yomhlaba Wonke. Iforamu, i-SPAR 3D Expo & Ingqungquthela kanye ne-AEC Next Expo & Conference. Ungavakashela amanethiwekhi abo okuxhumana nabantu ukuthola eminye imininingwane ezinsukwini ezizayo: I-LinkedIN, Facebook, Twitter, YouTube, futhi Instagram.
Ngenhlanhla kulo nyaka iTwingeo neGeofumadas babamba iqhaza njengabasekeli balo mcimbi, behlinzeka kabanzi ngomcimbi kubo bonke labo abanentshisekelo. Sizobe sikulethela lonke ulwazi kuqala.
Thumela Previous«Langaphambilini I-ESRI Venezuela eno-Edgar Díaz Villarroel weTwingeo 6th Edition
Post Next IBentley Systems Imemezela Ukutholwa kwe-SPIDAOkulandelayo »